kkn,ktho,kka,atn တို့ကိုယ်စား တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဒီpost လေးကတော့ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
၂၁ရာစုရဲ့လူနေမှုစနစ်တဲ့လား။ နည်းနည်းမှနွေးထွေးမှုမရှိတဲ့လူမှုစနစ်ပုံစံတစ်ခုပါပဲ။ ဇနီးနဲ့ခင်ပွန်းဟာ တစ်အိမ်ထဲမှာရှိနေကြစဉ်တောင် မေးလ်ပို့ ပြီးရင်ဖွင့်ရသည်။ အဲသည်နေ့ ကကျွန်မပို့ လိုက်သည်က “ဒီလောကမှာ စိတ်အညစ်ဆုံးမိန်းမတစ်ယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်လောလောဆယ် ရှင့်မိန်းမ ဆိုတာ သတိမထားမိဘူးမဟုတ်လား”လို့ ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ (http://privatecrazyworld.blogspot.com/2008/06/because-i.html) Art world မှ မမအတွက်သိင်္ဂီရေ မင်းတို့ သူငယ်ချင်းတွေရထားတဲ့ အသည်းတွေက ‘ကျောက်စရစ်အသည်း၊ လျှပ်စစ်အသည်း’ တွေဆိုရင် ကိုယ် ရထားတာက ‘ဘုတ်အုပ်အသည်းကြီး’ ကွ...။
ဦးချစ်မောင်ရဲ့ အယ်ဒီတာ အလုပ်ကြီးကို၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ “သူလိုလူ” ဖတ်ပြီးကတည်းက သဘောမကျတာ၊ အယ်ဒီတာ့ ဘိုးအေနဲ့ လာတွေ့နေတယ်... တကယ်ပဲ။
ဒီလူ လောဘကြီးချက်ကတော့ ရေးထားပြီးသမျှ စာတွေအားလုံး သူက edit လုပ်ချင်တာ ကလား။
သူ့လောဘနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ကိုယ့်မောဟ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်လို့ပါ။
ကျမတို့ အရွယ် (စပ်ကူးမတ်ကူး)မှာ အပြောများကြတဲ့ အိပ်မပျော်ခြင်းရောဂါ။ ဟို တစ်ယောက်ကလည်း၊ ညညအိပ်မပျော်ဘူး stressတွေ၊ worryတွေ။ တစ်ယောက်ကတော့ အိပ်ချိန်ကို ကောင်းကောင်းမရတာတဲ့။ တစ်ယောက်ကလည်း အိပ်ချိန်ကျမှ မီးလာလို့ အိမ်အလုပ်တွေ ထလုပ်ရ။
“ငါတနေ့ ဆယ်နာရီ အနည်းဆုံးအိပ်တယ်”လို့ ပြောလိုက်တော့။ “တကယ်လားဟင်တဲ့။”(stress နဲ့မမ က)။ အားကျသလိုလို။
ကျမကလည်း ကျန်းမာရေးဘဲ လိုက်စားသလိုလို၊ ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဘဲ ဇိမ်ရစ်သလိုလို အချိုးနဲ့ဆိုတော့ ‘အပျင်းမ’ လို့ မကလော်တော့ဘဲ အခြားသူတွေဘက်လှည့် နင်တို့ “problem ကဘာလဲဟင်”လို့ မေးနေလေရဲ့။
နေကုန်နေခမ်း သူအလုပ် လုပ်ရပါတယ်။ အိပ်ပစ်ရမဲ့ အချိန်တွေကို နှမြောတဲ့ အဲ့ဒီလူကလေ သူတစ်ယောက်တည်း ဖတ်ချင်သလောက်စာတွေကို (အိမ်မှာရှိတာတွေရော၊ Internet ကရော) အေးအေးလူလူ ဖတ်နိုင်ဖို့၊ အားမနာစတမ်း စု, တု, ပြုနိုင်ဖို့ …
“သီတာ မအိပ်သေးဘူးလား အိပ်တော့လေ အိပ် အိပ်” နဲ့ ပြောလွန်းတဲ့သူ့ကို အရွဲ့တိုက်ပြီး (သူ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို သူ့တစ်ယောက်ထဲနဲ့ ပစ်ထားလိုက်တယ် ဘာဖြစ်ဖြစ်။)
ငယ်ငယ်ထဲက အအိပ်,မက်လွန်းလို့ အကိုတွေက ‘မယ်ပျင်းကြီးမ’ လို့ဘွဲ့ပေးထားတဲ့ ကျမဘဲ ဘယ်ရမလဲ၊ ဘယ်အချိန် အိပ်လိုက် အိပ်လိုက် စိတ်ကောက်ပြီးအိပ်တာနဲ့ကို မတူဘူး။ အိပ်မပျော်ခင် ဘုရားဂုဏ်တော် ပွားတာ တစ်ခါမှ (၉)ပါး မပြည့်ဖူးဘူး။
အိမ်မက်ထဲမှာတော့ အိမ်ကလူလည်းပါတယ်။ ကွဲနေရတဲ့ ဆွေတွေမျိုးတွေ အစုံအလင်ပါဘဲ။ တခါများ မြတ်စွာဘုရားကလေ ဂဏာနို့ဆွမ်းတွေ လက်တော်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျမကို စွန့်ကြဲလို့။ မနက်မိုးလင်းရင် အဲ့ဒီလူကို အိမ်မက်တွေ တန်းစီပြောပြ။ အိပ်ချိန်ကြာတော့ အိမ်မက်ကလည်း တစ်ပုဒ်မကတော့ဘူးလေ။
နေထွက်လာတော့လည်း နိစ္စဓူဝ ဆောင်တာတွေ…။
တစ်ခါတော့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပြောပစ်လိုက်တယ်။ နောင်ဘ၀များကျရင်တော့ သနားစရာနဲ့ အမြဲတမ်း ရောပြွမ်းနေတဲ့ ‘မ’ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့လို့။
နေနှင့်ဦးပေါ့လေ...နောက် ဆယ့်ငါးနှစ်၊ နှစ် နှစ်ဆယ်လောက် ကျရင်တော့ ထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့ အဲ့ဒီလူကြီးလေ သူ့ကို ရေနွေးငှဲ့ပေးဖို့၊ မျက်စဉ်းခတ်ပေးဖို့၊ နင်းနှိပ်ပေးဖို့၊ ကံဆိုးရင် ရှူးရှူးပါတည်ဖို့။ သီတာ၊ သီတာနဲ့ တ တာထဲ၊ တာနေမှာ မြင်ယောင်သေး…
အဲ့ဒီအချိန်ကို စောင့်ရင်း၊ ကျမကတော့ အိမ်မက်တွေဆက်မက် နေရဦးမှာပေါ့လေ။
ကျမ ရည်ရွယ်သူအားလုံးလည်း ကျမလိုဘဲတေးထားကြမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
“မ”ရေ…“မ”ပြောတာတွေက ကျွန်မပြောချင်တာတွေနဲ့ ထပ်တူပဲ… ကျွန်မကျတော့ ဘာအသည်းလို့အမည်ပေးရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး…. ဘောလုံးပွဲရာသီ..ပြီးတော့ တင်းနစ်ရာသီ… အီးလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတခုများ အသစ်ရလိုက်ရင် သမီးရီးစားဖြစ်ကာစလို နူးနူးညံ့ညံ့ ကြင်ကြင်နာနာ…ကြာတော့ ချက်စီးလ်ကိုပဲ မနာလိုရမလို… ဖဒ်ဒရာကိုပဲ မနာလိုရမလို…အီးလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတွေပဲ မနာလိုရမလိုနဲ့ .. အိပ်ပြီးရင်းအိပ်နေလို့လူလဲ ၀ပြီးရင်းဝ… ဂျူး ဝတ္တုထဲကလိုပဲ “မ”ရေ…
မှန်လိုက်လေ သီတာရေ။ ဟဲဟဲ။ ကိုယ်လို လူတွေ အများကြီးရှိနေတာ သိရတဲ့အတွက် အားရှိရပါတယ်။ သူတို.ဘက်ကရော ဘာများပြောချင်နေသေးလဲ မသိ။
hi thidar, sorry for not writing in myanmar.First, you titled me as 'stress ma ma'??Ofcourse I havealot of stress!!!
I am busy withe internet, k-drama and xxx, so that most of the time, I forget about my hubby.(you said I am 'busy ma ma' and 'greedy ma ma')
But if I am alone at home, I miss my hubby until I cry, coz, I dare not stay at home alone. Don't blame me you know I dare not sleep alone and TLN also same as me!!!
However, I cannot imagine or dream that I will be together with him for next 30 or 20 years!!!!!
“သီတာ မအိပ်သေးဘူးလား အိပ်တော့လေ အိပ် အိပ်” နဲ့ ပြောလွန်းတဲ့သူ့ကို
ပြန်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် မသီတာရေ။ ကျွန်မ အိမ်ကတစ်ယောက်ကတော့ အဲလိုတောင်
ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တကူးတက ပို့ ရေးတင်ပေးတာကျေးဇူးနော်။ လင့်ထားလိုက်ပါပြီ။
တန်ခူး, သိင်္ဂီ, me me နဲ့ မယုဝရီ အမြင်ချင်းတွေ ဖလှယ်ခွင့် ရလို့ရယ်, နည်းပညာကြောင့် ဖော်ပြခွင့် ရတဲ့ ခင်မင်ခြင်း Link လေးတွေကြောင့်ရယ် ကျေးဇူးပါလို့ ပြောရင် အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကို သေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းမထားကြေးနော်